आणविक शक्तिसहितको जहाज बनाउदैँ चीन, अमेरिकाको सातो उड्यो ! | SAMAJBAD
आणविक शक्तिसहितको जहाज बनाउदैँ चीन, अमेरिकाको सातो उड्यो !
काठमाडौं : एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो नौसैनिक शक्ति बढाउन चीनले आफ्नो चौथो विमानवाहक जहाज निर्माण गरिरहेको खुलासा भएको छ । चीनले बनाईरहेको जहाज आणविक शक्तिको सम्भावना रहेको साउथ चाइना मोर्निंग पोस्टले चिनियाँ नौसेना नजिकका एक व्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै समाचार प्रकाशिचत गरेको छ । जहाज निर्माणकर्ताहरू चौथो वाहकको निर्माणसँगै महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुनेमा विश्वस्त रहेको सो अनलाईनले जनाउको छ । यो जहाज निर्माण उद्योगका लागि प्रविधिको छलांग हुने अलजजीराले जनाएको छ । अर्को अज्ञात स्रोतले यो प्रकाशनलाई चिनियाँ अधिकारीहरू चौथो वाहकका लागि आणविक शक्ति प्रयोग गर्ने प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेका छन्। उक्त व्यक्तिले अन्तिम निर्णय लिइएको होईन भनेर भनेनन्, तर यो धेरै साहसी निर्णय हो जुन चुनौतिहरूले भरिएको छ । चौथो जहाज निर्माण, जुन पहिले नै दुई बर्षको लागि ढिलाइ भएको अलजजीराले जनाएको छ । हालमा दुईवटा चिनियाँ विमान वाहकहरू यसअघिका सञ्चालनमा छन् र तेस्रो एउटा जुन यस बर्षमा प्रक्षेपण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तीन मध्ये कुनै पनि जहाजसँग आणविक क्षमता छैन।
यो २०१७ मा चीनले आफ्नो पहिलो रक्षा घरेलू उद्योगको टेक्निकल परिष्कृतताको प्रदर्शनका रूपमा विमान वाहकको प्रक्षेपण गरेको थियो । ५०,००० टनको वाहकलाई सांगडोंग चिनिन्छ, जुन सोवियत कुज्नेत्सोभ वर्ग डिजाइनमा आधारित छ, उडानका लागि स्की जम्प स्टाइल डेक र पारम्परिक तेल ईन्धन भाप टर्बाइन पावर प्लान्टमा आधारित छ । अर्को जहाज ६०,००० टन लाओनिंग विमानवाहक हो, जुन युक्रेनबाट खरिद गरिएको थियो। यो तेस्रो एकमा यो वर्ष सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। अनुमानित विस्थापन लगभग ८५,००० टन रहेको पोष्ट रिपोर्टले जनाएको छ।
सञ्चालनमा रहेका दुईवटा विमानवाहक वाहकको अलावा चीनले आफ्नो शस्त्रागारमा एक दर्जन भन्दा बढी आणविक शक्ति पाएका पनडुब्बीहरू रहेका छन् । चीनले आफ्नो वाहक सञ्चालनलाई काममा ल्याउन काम गरिरहेको छ तर संयुक्त राज्यसँगको तुलनामा थोरै अनुभव भएको छ जसले दशकौंसम्म बहुवाहक जहाजको साथ एकीकृत वाहक युद्ध समूह सञ्चालन गरिरहेको छ। चीनले दक्षिण चीन सागरको लगभग सबै उर्जायुक्त पानीको दाबी गरेको छ, जहाँ उसले कृत्रिम टापुहरूमा सैन्य चौकीहरू स्थापित गरेको छ।
Previous articleओलीले जनता र महिलालाई बहाकाएर सत्ता टिकाउन खोजे : देउवा
Next articleउत्तर कोरियासँग वार्ता गर्ने बाईडेनको प्रयास असफल, किमले दिएनन् प्रतिक्रिया